Akhriso Odoyaasha sacad iyo saraakiisha amniga oo gaalkacyo shir xasaasi ah ku yeeahay - HOBYOMEDIA
Home WARARKA GALMUDUG Akhriso Odoyaasha sacad iyo saraakiisha amniga oo gaalkacyo shir xasaasi ah ku...
Akhriso Odoyaasha sacad iyo saraakiisha amniga oo gaalkacyo shir xasaasi ah ku yeeahay
Magaalada Gaalkacyo ee Xarunta Gobolka Mudug waxaa kulan ku yeeshay Odayaasha Dhaqanka,Culimada iyo Maamulka degmada,kaas oo looga hadlayaya Amniga Magaalada iyo dhibaatooyin kale ee ka jira.
Kulanka ayaa waxaa lagu gorfeeyey sida la isaga kaashan karo waxka qabashada xaalada amni ee Magaalad oo dhowr jeer dilal ka dhaceen iyo maandooriyaha Khamriga & Xashishka oo dhibaatooyin badan ku haaya Magaalada Gaalkacyo.
Saraakiisha Ciidamada Amniga Galmudug oo kulanka goobjoog ka ahaa ayaa waxaa ay sheegeen inay Cullimada iyo Odayaasha Dhaqanka looga baahan yahay inay Ciidamada ku garab istagaan sugida Amniga iyo wax ka qabashada dhibaatooyinka ka dhaca Magaalada Gaalkacyo.
Guddoomiyaha Gobolka Mudug ee Galmudug Cabdiraxmaan Cali Diiriye Isxal iyo Duqa degmada Xirsi Yuusuf Barre ayaa waxaa ay sheegeen in tallaabo Sharci ah ka qaadi doonaan dadka isku daya inay khalqal geliyaan Amniga Magaalada Gaalkacyo.
Previous articleGabar arin dhif iyo naadir ah awged isugu dishay galmudug (qoral naxdin leh)
Gabar arin dhif iyo naadir ah awged isugu dishay galmudug (qoral naxdin leh)
Xog madaxweyne xaaf oo gaalkacyo kula kulmay wafdii uu soo diray qoor qoor mxaa soo kordhay?
Wararkii u danbeeyay dagaal culus oo ka dhacay kismaayo
Akhriso Odoyaasha sacad iyo saraakiisha amniga oo gaalkacyo shir xasaasi ah...
Gabar arin dhif iyo naadir ah awged isugu dishay galmudug (qoral...
Xog madaxweyne xaaf oo gaalkacyo kula kulmay wafdii uu soo diray...